1x3 Tafura Yekofi - Dhizaini magazini
Tafura Yekofi 1x3 inofemerwa nekubatanidza mapazuru e burr. Izvo zvese zviri zviviri - chidimbu chemidziyo uye hutachiona hwehuropi. Zvikamu zvese zvinogara pamwechete pasina kuda chero zvigadziriso. Nheyo yekubatanidza inosanganisira kungofamba-famba kwekupa yakanyanyisa kukurumidza kuita musangano uye kuita 1x3 yakakodzera kushandurwa kwenzvimbo. Chikamu chekunetseka hachitsamiri pane dexterity asi zvakanyanya pakuonekwa kwezvemweya. Mirayiridzo inopihwa kana mushandisi achida rubatsiro. Iro zita - 1x3 chirevo chemasvomhu chinomirira mafungiro echimiro chehuni - chinhu chimwe chinyorwa, zvidimbu zvitatu zvacho.
Zita rechirongwa : 1x3, Vagadziri zita : Petar Zaharinov, Izita remutengi : PRAKTRIK.
Tafura Yekofi Petar Zaharinov 1x3